လူတိုင်းမှာကွန်းခိုရာနေရာလေးတစ်ခုတော့ရှိစမြဲပါ။မတူညီတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေရတာတစ်ခါတစ်ခါတော့ မွန်းကျပ်လှပါတယ်။ဘုရားရှင်၏တရားတော်များကိုနာယူမှတ်သားရင်းဘဝအမောတွေကိုကျာ်ဖြတ်ရပါတယ်။ ဝါသနာပါရာဘလော့်ဖတ်ရှုရာမှရေးတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ဝါသနာပါတဲ့ဟင်းချက်နည်းတိုတိုထွာထွာလးတွေကိုရေးသောဒီဘလော့်ကလေးသည်သာမိမိဘဝရဲ့ခတ္တခဏကွန်းခိုရာ။......။
စိမ်းစိမ်း နဲ.အခါးမျိုး၊ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတာက အလုံးကြီးကြီးနဲ.အစိမ်းဖျော့ အချိုမျိုး၊ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် စမ်းကြည့်
ဖို.ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒေါ်ဦးမှာ ချောင်းမဆိုးပေမဲ့ ညညအိပ်ရင်လည်ပင်းထဲမှာချွဲဆို.သလိုခံစား
နေရတာနှစ်တော်တော်ကြာနေပါပြီ။အိပ်မပျော်မချင်း တဟင်;ဟင်;နဲ. အနေခက်ပါတယ်။ချွဲဟပ်
လို.လဲမရပါဘူး။နောက်ပိုင်း သူများညွှန်တာနဲ.မြန်မာပြည်ကဆေးမှာပြီး အိပ်ခါနီးငုံအိပ်မှဘဲရသွား
တော့တယ်။(ဆေးက mybacin lozenges ပါ) ဆေးဆိုတာ ရေရှည်စွဲသုံးရင်မကောင်းတော့
ချက်နည်းလေးကိုပြောပြမယ်နော်။ခရမ်းကဆော့သီးလေးတွေကို အညှာချွေ ရေဆေးပြီး အိုးကင်းပူ
တိုက်တယ်။(ဒယ်အိုးထဲထဲ့ပြီးမီးအနေတော်လေးနဲ.မွှေပေးနေတာ)အသီးလေးတွေ ရှုံ.ပြီးအရောင်ပြောင်းလာရင်ရပါပြီ။ပြီးရင် ဓါးပြားလေးနဲ.ဖြစ်ဖြစ်၊ငရုတ်ကျည်ပွေ.လေးနဲ.ဖြစ်ဖြစ် တစ်ချက်စီလောက်ထုလိုက်ပါ။ချက်တဲ့အခါ ခရမ်းသီးနှပ်တဲ့အတိုင်းပါဘဲ။ကြက်သွန်ဖြူ နီ၊ငရုတ်သီးနဲ.ဆနွင်းမှုန်.တို.ကိုဆီသတ်ပြီးရင်အသီးထဲ့ပုဇွန်ခြောက်မှုန်.နဲ.ဆားအနည်းငယ်
စားပြီးနှစ်ရက်လောက်မှာဘဲ နှစ်ချီခံစားလာရတဲ့ အဟင်; အဟင်;ကြီး ဘယ်ရောက်သွားလဲ
ပင်နီစူလာနဲ.ယိုးဒယားဈေးမှာဘဲဝယ်ဘူးတာ ဈေးထဲက ကုလားဆိုင်တွေမှာရမှန်းမသိဘူး။
နောက်မှသိတော့ဝယ်ကြည့်တာ ၂ဆတောင်ရတယ်။ကုလားဆိုင်က ၁ ဒေါ်လာဘိုးဆိုတော်တော်စားရပါတယ်။အစာလဲဆေး.ဆေးလဲအစာဆိုတာလို ကိုယ်စားတဲ့အစာထဲမှာကိုဆေးစွမ်းကောင်းတွေရှိနေပါတယ်။သိဖို.ဘဲလိုတာပါ။
ပါတယ်။အားလုံး နှစ်သစ်မှာ ဘေးဘရာတွေဝေးကွာပြီး ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေလို. ဆုတောင်း
Posted by Aunty Oo at 11:17
မီးမီးငယ် 16 April 2012 at 05:12
Anonymous 16 April 2012 at 09:48
very good aunty.i will try coming saturday.thanks
Anonymous 16 April 2012 at 16:31
အိုင်အိုရာတုို့ အိမ်ကခရမ်းကဇော့သီးအရမ်းကြိုက်ကြတယ်။ အပင်လည်းရှိတော့ခဏခဏချက်စားဖြစ်တယ်။ မီးဖုတ်ပြီး ငါးပိနဲနဲနဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်းကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ထောင်းပြီးဆီစိမ်းလေးဆမ်းပြီးစားရင်လည်းအရမ်းစားကောင်းတယ်။ တစ်ခါတစ်လေရှမ်းနံနံပါထဲ့ထောင်းတယ်။ ငါးပိနဲ့ ပုဇွန်ခြောက်နဲ့ မန်ကျည်းရည်နဲ့ လည်း ငရုတ်သီးစိမ်းတွေထောင်းထဲ့ပြီးရခိုင်ချက်လိုမျိုး ဆီနဲနဲလေးနဲ့ လည်းချက်စားတယ်။ အစိမ်းလုံးကွဲထုပြီးပုဇွန်ခြောက်နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူနီနဲ့ ဆီပြန်လေးလည်းအန်တီဦးချက်သလိုချက်တယ်။ ယိုးဒယားဟင်းချိုချက်ရင်လည်းမပါမဖြစ်ထဲ့ကြတယ်။ မီးအုံးပြီးရောပြုတ်ပြီးရောတုို့ စားတယ်။ ခုတော့မစားရတာကြာလှပြီ။
စံပယ်ချို4December 2013 at 10:48